एक अपरिचित महिला सैफ अली खानको कोठामा एक्कासी पसेपछि यस्तो सम्म भयो, करीना भईन् हैरान
सैफ अली खान तथा करिना कपुर केही महिना पहिला बान्द्रा स्थित आफ्नो नयाँ घरमा शिफ्ट भएका छन् । यसभन्दा पहिला उनीहरु फच्र्यून हाइट्स अर्पाटमेन्टमा बस्ने गरेका थिए । यो घरमा उनीहरुको एकदमै मिठो यादहरु जोडिएको छ । कुनै यस्ता यादहरु समेत रहेका छन् कि दुबै कपलको लागि एकदमै अनौठो थियो ।
यशराज फिल्मस्द्धारा शेयर गरिएको भिडियोमा सैफले आफ्नो दारीको अनुभवका बारेमा पनि बताएका थिए । यसै क्रममा सैफले घरमा भएको एक घटनाका बिषयमा समेत बताएका छन् । सैफले आफ्नो घरमा एक अपरिचीत महिला घुसेका जिकिर समेत गरेका छन् । उनले घटना बारे बताउँदै भने– मैले ढोका खोले । एक अपरिचित महिला घर भित्र छिरिन् । मलाई देखिन् र भनिन् तिमि यहाँ बस्छौ ?
मलाई थाहा थिएन उनी पुरै कन्फिडेन्सका साथ सिधै मेरो घरमा छिरेकी थिईन् । ति महिला सिधै कोठा भित्र छिरेपछि करीना हेरेको हेरै भएकी थिईन् । यति देखे पछि करिनाले भनिन्– के तिमि केही भन्दैनौ ? म के भनौ भन्ने आफैमा दुबिधामा थिए । त्यसपछि मैले भने कि तपाई यहाँ बाट जानु होस् । यहाँ छिरेर के गरिरहनु भएको छ । ति महिलाले ओके भनेर फेरी बाहिर सरासर गएकी थिईन् ।
हजुरबुवा रणधीर कपूरको घरमा सुटुक्क पुगेका करिनाका छोरा तैमुरलाई के भयो यस्तो
निकै महंगा भएका छन् बलिउड अभिनेता जोन अब्राहम,चलचित्र ‘एक भिलेन रिटर्न्स’ बाट लिए २१ करोड पारिश्रमिक
अभिनेता सञ्जय दत्तकी पहिलो पत्नि ऋचाकी छोरी त्रिशाला छिन् निकै हट,सम्पत्ति मात्रै छ करोडौ
अभिनेत्री दीपिका पादुकोणलाई गालामा चुम्मन गर्ने को हुन यि युवक ?
एक्स मिस युनिभर्सले लगाएकी थिइन् शटबिनाको यस्तो अर्धनग्न लुगा, मानिसहरूले भने- अरे यार , लाज त ढाक्नुहोस्